0 Best-selling blood pressure monitor brand in Singapore | Omron
ရွေးချယ်ဖို့ အကူအညီ လိုပါသလား
ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်သည့် Selecter ကို အသုံးပြုပါ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ Omron သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်များထဲတွင် အကောင်းဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
သွေးတိုးခြင်းသည် အလွန်အန္တရာယ်များသော အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီး နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်သာ အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ။ မကုသဘဲ ထားပါက သွေးတိုးခြင်းကြောင့် တဖြည်းဖြည်းနှင့် အတွင်းကလီစာများပျက်စီးယိုယွင်းလာပြီး ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ လေဖြတ်ရောဂါအစရှိသည့် နာတာရှည်ရောဂါများ ခံစားရနိုင်ပါသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် အရွယ်ရောက်လူကြီး သုံးယောက်လျှင် တစ်ယောက်သည် သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိနေပါသည်။ များသောအားဖြင့်လည်း လက္ခဏာများကို သတိမပြုမိတတ်ကြပေ။
သင့်နှလုံးကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းပြီး ဘဝရဲ့ တန်ဖိုးရှိသော အချိန်များကို ခံစားလိုက်ပါ။ Omron ဒီဂျစ်တယ် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်ကို အသုံးပြုပြီး သင်၏နေအိမ်တွင် သက်တောင့်သက်သာရှိစွာဖြင့် သွေးပေါင်ချိန်မှန်မှန်တိုင်းတာပြီး သင်၏ နှလုံးကိုကျန်းမာအောင်စောင့်ရှောက်လိုက်ပါ။
Omron အနေဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်ပေါင်း သန်း ၂၀၀ ကျော် ရောင်းချခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍လည်း မိမိအိမ်တွင်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာမှုကို ပို၍ တိကျစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် နည်းပညာအသစ်များ စမ်းသပ်တီထွင်လျက်ရှိပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့် နည်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော Omron အမျိုးအစား လက်မောင်းပတ် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက်နှင့် လက်ကောက်ဝတ်ပတ် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းစက် အမျိုးမျိုးသည် တိကျသော သွေးပေါင်ချိန်အဖြေများ ထုတ်ပေးနိုင်သလို တခြားအရေးကြီးသော အရာများဖြစ်သည့်
၁. ကုသမှုတွင် အသုံးဝင်မှု
၂. Innovative Intellisense technology ပါဝင်သောကြောင့် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းရာတွင် လက်ပတ်ကို အလွန်အမင်းတင်းကျပ်မှုမရှိစေပဲ တိုင်းတာပေးနိုင်မှု
၃. နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်းကို ရှာဖွေပေးနိုင်မှု
၄. အချက်အလက်များ အများအပြားသိုလှောင်ပေးနိုင်မှု စသည်တို့လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
Know more about သွေးပေါင်ချိန် တိုင်းခြင်း
အခြေခံကျကျပြောရလျှင် သွေးပေါင်ချိန်ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ သွေးကြောများထဲတွင် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသော သွေးများမှ သွေးကြောနံရံများအပေါ် သက်ရောက်နေသော အားကိုဆိုလိုပါသည်။
သွေးကြောများထဲတွင် ဖိအား တောက်လျှောက်များနေသော အခြေအနေဖြစ်ပြီး ထိုအခါတွင် သွေးများများထုတ်လွှတ်နိုင်ရန် နှလုံးမှ ပို၍ပြင်းထန်စွာအလုပ်လုပ်ရပါသည်။
ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။ နေ့နှင့်ည အချိန်ပေါ်မူတည်၍ သော်လည်းကောင်း၊ သွေးပေါင်ချိန် တိုင်းတာသည့်အခြေအနေပေါ်မူတည်၍သော်လည်းကောင်း သွေးပေါင်ချိန်သည် အပြောင်းအလဲရှိပါသည်။
မည်သည့်အချိန်တွင် သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း?
အိပ်ယာထပြီး ၁ နာရီအကြာနှင့် ညအိပ်ယာမဝင်မီ ၁ နာရီအလိုတွင် တိုင်းတာခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
သွေးပေါင်ချိန်ကို အိမ်တွင်တိုင်းတာခြင်းနှင့် ဆရာဝန်ဆီရောက်မှ တိုင်းတာခြင်းတွင် မတူညီမှုရှိနိုင်ပါသလား?
ရှိနိုင်ပါသည်။ သွေးပေါင်ချိန်သည် နေ့စဉ်အချိန်နှင့်အမျှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြောင်းလဲနေသောကြောင့် ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်းသည် ပုံမှန်သာဖြစ်ပါသည်။
အိမ်မှာ ဘာလို့ သွေးပေါင်ချိန် တိုင်းဖို့ အရေးကြီးတာလဲ?
အိမ်တွင် မိမိဖာသာ သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းခြင်းသည် သွေးတိုးကျဆေးများ၏ သက်ရောက်မှုများအပြင် Masked hypertension နှင့် တခြားရှာဖွေရန်ခက်ခဲသော ရောဂါများကိုပါ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် အသုံးဝင်ပါသည်။